ဂျယ်ရီ Varghese အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Careers နှင့််ထမ်းခေါ်ယူမှု
ဒီဇင်ဘာလတွင် 31, 2017
အလုပ်အကိုင်အကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အဂျယ်ရီ Varghese အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Careers ဖြေရှင်းနည်း။ အိန္ဒိယကနေကျွမ်းကျင်သူများ လူတွေကိုအလုပ်အကိုင်ရရှိရန်ကူညီခြင်း.
ဂျယ်ရီ Varghese အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Careers နှင့်အတူဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ဘ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီရှာဖွေစုဆောင်းတို့တွင်အကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်, ဂျယ်ရီ Varghese အတွင်းဦးဆောင်စုဆောင်းမှုအုပ်စုတစ်စုဖြစ်ပါသည် ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့အပရော်ဖက်ရှင်နယ်စုဆောင်းမှုဖြေရှင်းနည်းများ။ ထိပ်တန်းငှားရမ်းရာထူးနှင့်အတူဒွန်တွဲ။ ဂျယ်ရီ Varghese အကောင်းဆုံးနဲ့ထိပ်ဆုံး rated အတိုင်ပင်ခံဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကုမ္ပဏီဘက်ပေါင်းစုံပြီးပြည့်စုံစွာထောက်ပံ့ ပင်လယ်ကွေ့တွင်စုဆောင်းမှုန်ဆောင်မှုများ.
သငျသညျဂျယ်ရီ Varghese အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Careers အသုံးပြုတဲ့အခါတစ်ချိန်တည်းမှာပင်။ ကျိန်းသေ, သူတို့က ဒူဘိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောနေရာချထားမှုကိုပေး။ သငျသညျအလုပ်မလုပ်နိုင်သောနောက်ထပ် key ကိုအမှတ်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အစိုးရအလုပ်အကိုင်များဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကုမ္ပဏီမှတ်မိဖို့ပထမဦးဆုံးအရာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာခိုင်ခံ့ရှိနေခြင်းရှိခြင်း သူတို့ 30 နှစျကျြော operated ။ အပြုသဘောဘက်တွင်သင်သည်ဤစုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အရှာဖွေနေကြဘူးသည့်အခါ။ သငျသညျမြျှောလငျ့နိုငျ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်ဝန်ထမ်းများန်ဆောင်မှုများ။ ပင်လယ်ကွေ့ကုမ္ပဏီဒါပေမယ့်လည်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတိုင်းအတာအပေါ်မဟုတ်ပဲ။
ပြီးခဲ့သည့် 25 နှစ်ပေါင်းအဘို့, ဂျယ်ရီ Varghese အလုပ်ရှာဖွေသူများကူညီပေးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှနှင့်စကားပြောလည်းအိန္ဒိယတို့ပါဝင်သည်နှင့် ပါကစ္စတန်။ ကုမ္ပဏီအကောင်းဆုံးများထဲမှကြောင်းအများစုကဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထား။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်ရှာအပေါ်သူတို့ရဲ့အလုပ်သမားရှိနေခြင်းဖြစ်ပါသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာကျွမ်းကျင်မှုစျေးကွက်.
ဤအကြောင်းကြောင့်, ငါတို့သည်သင်တို့မှကုမ္ပဏီမိတ်ဆက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ အဖြစ်ကအရမ်းကောင်းစွာစုဆောင်းစျေးကွက်၏ကုမ္ပဏီနားလည်မှုအထက်ပြ။ မည်သည့်အဖြစ်အပျက်၌, ထိုသူတို့အဘို့ရှာဖွေအလုပ်အကိုင်အကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှုပါပဲ။ တိုင်းအသစ်က အဆိုပါ GCC အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေခြင်းဖြင့်ဒုက္ခနှင့်ရင်ဆိုင်နေရအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူ.
အဆိုပါဂျယ်ရီ Varghese ဒူဘိုင်းဂျော့ဘ်
ဒါပေမဲ့ဒီကုမ္ပဏီနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ကိုင်အချိန်ကိုကျော်။ သငျသညျကိုအကောင်းဆုံးပေးအလုပ်ရှင်များနှင့်ရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်အတူ နိုင်ငံတကာအလုပ်အကိုင်များစျေးကွက်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုငှားရမ်း။ အဆိုပါချုပ်လုပ် တိုင်းကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဘို့အဖြေရှင်းချက်ငှားရမ်း Facebook နှင့် LinkedIn ပေါ်မှာဤကုမ္ပဏီအလွစေသည်။ သူတို့ရဲ့စုဆောင်းမှုလိုအပ်ချက်များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်တိကျသောကုမ္ပဏီများမှကူညီပေးနေဒူဘိုင်း, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာအလုပ်ခန့်။
11 စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်ဂျယ်ရီ Varghese ။ အခြိနျမှနျမှဒီကုမ္ပဏီထဲမှာ ဒူဘိုင်းဝန်ထမ်းများသူတို့၏ client ကိုရဲ့ငှားရမ်းမတူညီလူအင်အားနှင့်အတူလိုအပ်နေပါသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်အနေဖြင့်လတ်ဆတ်သော, သင်တန်း, ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအတွေ့အကြုံအပေါ်မူတည်ပါသည်။ အတူပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစိန်ခေါ်မှုများများအတွက် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့။ ဒီကုမ္ပဏီကိုလက်ရှိကြိမ်သုံးစွဲဖို့အကောင်းဆုံးကိုပြုလုပ်ခြင်း။
ဂျယ်ရီ Varghese အပြည့်အဝအလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီအလုပ်လုပ်နှင့်သင်သည်ထိုသူတို့သငျသညျကိုကြိုက်အချိန်မရွေးကိုသုံးနိုင်သည်။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်ကိုတက်, အရှုပ်ထွေးဆုံးစုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီ တာဝန်ကျ GCC နိုင်ငံတွေအပေါ်အခြေခံထားတယ်။ သို့သော်သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူစိတ်ဝင်စားနေရာလွတ်ဟာသူတို့ရဲ့ website တွင်ဖြေလျှော့တွေ့ပါလိမ့်မည်။ ရေရှည်မှာမှာတော့စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများအသိအမှတ်ပြု ဒူဘိုင်းတွင်အများအပြားအလုပ်ရှာဖွေသူများကိုကူညီ။ ဤမျှလောက်များစွာသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့်အတူဖောက်သည်များနှင့်သင်တန်း၏ကြီးမားသောပမာဏနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကုမ္ပဏီ။
ကျိန်းသေအလုပ်လုပ်ကိုင် ထိုကဲ့သို့သောဒူဘိုင်းတက္ကစီအဖြစ်အသိုင်းအဝိုင်းအလုပ်အကိုင်များ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူတစ်ပစ်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကောင်းသောတန်ဖိုးများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းကြောင့်ကုမ္ပဏီအပေါ်အခြေခံပါတယ်။ စျေးကွက်ငှားရမ်းထကတိကဝတ်များနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများအတွက်အမှန်တကယ်ကဒီအဖွဲ့အစည်းကလုပ် ဒူဘိုင်းမြို့ရှိလူ့အရင်းအမြစ်များကိုအကောင်းဆုံး.
ဂျယ်ရီ Varghese တနာတစ်ဦးဖြစ်သင့်
ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိဂျယ်ရီ Varghese အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစျေးကွက်ကျော်အလုပ်လုပ်ကိုင်။ အောင်မြင်စွာပေး စုဆောင်းမှုန်ဆောင်မှုများ 30 နှစ်ကျော်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ဒီကုမ္ပဏီလည်းအိန္ဒိယအတွက်ရုံးရှိသည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် & လုပ်သားအင်အားစုဆောင်းမှုဖြေရှင်းချက်ပေး foreground ကုမ္ပဏီ၌တည်၏။ ယေဘုယျအားဖြင့်အဘို့စကားပြော ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်စတင်ချင်သူကိုအိန္ဒိယလူမျိုး။ ထိုအခါ မှစ. 500 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ clients များကျော်အချိန်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်လိုအပ်ချက်များဖြည့်ဖို့ရှာဖွေနေ။ ထိုခဏခြင်းတွင်သင်သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေရာလွတ် ပတ်သက်. စကားများပြန့်နှံ့ခြင်းနှင့်လျှောက်ထားသည့်အခါ အလုပ်အစာရှောင်ခြင်းအရ.
စုဆောင်းရေးမျှော်လင့်ချက်များထက်ကျော်လွန်သွားပင်လယ်ကွေ့ကုမ္ပဏီများသည်။ ဒါကြောင့်သင်ကသင့်လျော်သောအခန်းကဏ္ဍကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်ပါတယ်နှင့် သင့်ရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းထိတွေ့မှုများအတွက်အတိုင်ပင်ခံ။ ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသင်ဂျယ်ရီနှင့်အတူလျှောက်ထားသည့်အခါသင်၏ CV ပြည့်စုံဘို့ပေးမညျ အလုပ်အကိုင်အဒူဘိုင်းအတွက်ကမ်းလှမ်း 2018.
ဂျယ်ရီ Varghese ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
ဤသည်စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီဂျယ်ရီ Varghese တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် 30 ပေါင်း၏အနှစ်ကျော်ကဂုဏျစကားပြော အောင်မြင်စွာစုဆောင်းမှုန်ဆောင်မှုများ။ ထို့အပြင်တစ်ဦးကုမ္ပဏီပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပေး အလုပ်အကိုင်အဆော်ဒီအာရေဗျရှာဖွေနေ & လုပ်သားအင်အားစုဆောင်းမှုဖြေရှင်းနည်းများ။ သူတို့ကလူတွေကိုကူညီပေးနေကြပါသည် အိန္ဒိယကနေဗီဇာရဖို့ဘယ်လောက်.
ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူ, သငျသညျ 400 ပေါင်း client ကိုအဖွဲ့အစည်းများကျော်နှင့်အတူလစဉ်လတိုင်းအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဤသည်ကုမ္ပဏီအတွက် 11 စက်မှုလုပ်ငန်းဒေါင်လိုက်အနှံ့ပြန့်နှံ့ သင်ကိုယ်တိုင်စျေးကွက်နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာပင်လယ်ကွေ့.
ယင်းထက်ကျော်လွန်သွားဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်ဂျော့ဘ် ်ထမ်းရှာဖွေသူပရိုဖိုင်းကို, ဒီကုမ္ပဏီညီညွတ်သောအာရပ်အလုပ်ဈေးကွက်ထဲမှာအတိုင်ပင်ခံ၏အခန်းကဏ္ဍကိုကစား။ ဒါကကုမ္ပဏီပြည့်စုံ & ကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်သောစုဆောင်းရေးသည် ပင်လယ်ကွေ့အလုပ်ဈေးကွက်စီးပွားရေးအမှုဆောင်အရာရှိများအတွက်န်ဆောင်မှု။
နယူးစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အစိုးရကဏ္ဍများ။ အထူးကုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိအမှတ်ပြုသုံးပြီးလူအင်အားဖြေရှင်းချက်ပို့ဆောင်ရန်ကျူးလွန်နေသည် စုဆောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည် စနစ်, အရင်းမြစ်များ & နည်းပညာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ client ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်။
ကုမ္ပဏီနှင့်အမျှဂျယ်ရီ Varghese အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Careers အာဏာသည်လူကိုယုံကြည်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်။ ဤသည်စီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းမဆိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏တန်ဖိုးအရှိဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကြောင်းခံစားရပါတယ်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်လုပ်နေသည့်အများစုအတွက်အဓိကအိပ်မက်ဖြစ်ပါသည် လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ပြည်တော်ပြန်.
်ထမ်းခေါ်ယူမှုကုမ္ပဏီများမှပြည်တော်ပြန်များ၏လိုအပ်ချက်အပေါ်ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအမြဲကြိုးစားတယ် ရှေးခယျြထားနှင့်အခြားသူများကူညီပေးနေခံရဖို့။ ကြှနျုပျတို့သညျဤကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးသားနေကြသည်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစီမံခန့်ခွဲမှုထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့် GCC အတွက်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းထိန်းသိမ်းထား။ ဂျယ်ရီ Varghese မဆိုအဖွဲ့အစည်းအတွက်အကောင်းဆုံးရရှိနိုင်အရင်းအမြစ်များကိုအသုံးချ။
သူတို့တစ်ဦးအဖြစ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဆယ်စုနှစ်ထက်ပိုဖြုန်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကကုမ္ပဏီကောင်းစွာအလုပ်လုပ် HR ပရော်ဖက်ရှင်နယ်။ ဒီကုမ္ပဏီကို run ထက်ပို 31 နှစ်ပေါင်းနောက်ကျောကိုယူ။ အထူးသဖြင့်ဒီကုမ္ပဏီကိုတစ်ဦးကမ္ဘာ့အဆင့်မီအဖွဲ့အစည်းကိုဖန်တီးပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများအိန္ဒိယဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုမ္ပဏီများမှပံ့ပိုးပေးရန်စကားပြော။ အဖြစ်အဘို့အရေးကြီးဆုံးအရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်း အဆိုပါ GCC အတွက်စုဆောင်းမှုအရင်းအမြစ်များကိုစျေးကွက်။ ဂျယ်ရီ Varghese အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Careers အိန္ဒိယကျွမ်းကျင်သူများအဘို့အကောင်းတစ်ဦးကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။
ပင်ဒီကုမ္ပဏီစုဆောင်းမှုကို run ခင်မှာ။ အဆိုပါ startup အိန္ဒိယတွင်ကောင်းသောအခြေခံအဆောက်အဦများလိုအပ်သည်။ ကုမ္ပဏီ ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွင်းခိုင်မာတဲ့ကျွမ်းကျင်ပိုင်နဲ့စတင်။ သူတို့ကတစ်ဦးကောင်းမွန်စွာပေါင်းစည်းငှားရမ်းစနစ်နှင့်အိန္ဒိယအတွက်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီနည်းပညာနဲ့စတင်ပါပြီ။
သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူစကားပြောနိုင်သည် ကုမ္ပဏီများနှင့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့်အတူမိတ်ဖက်မိုဘိုင်းပေါ်တွင်။ ဒါဟာကျူးလွန်ငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်မှန်မှန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက်ငှားရမ်းအရင်းအမြစ်များကိုအဆင့်မြှင့်ဆီသို့ဦးတည်။ ထိုအခါပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများသို့ပြည်တော်ပြန်လွှဲပြောင်း။ သောအရှိဆုံးဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထား သင်ဤကုမ္ပဏီကိုဆက်သွယ် start သင့်တယ် သူတို့ရဲ့ကြေးစားန်ထမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုလူအပေါင်းတို့သည်အများအပြားနိုင်ငံများတွင်နေရာချထား servicing ထံအပ်နှံကြသည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်၌ရှိသမျှသောဆော်ဒီအာရေဗျကျော်အလုပ်အကိုင်ရှာတှေ့နိုငျ ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင်အလုပ်အကိုင်.
တန်ဖိုးရှိသောအဆိုပါဂျယ်ရီ Varghese အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Careers အိန္ဒိယ client နှင့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ။ သူတို့ထံမှတစ်ဦးချင်းစီငှားရမ်းလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းကူညီခြင်းဤသည်စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီ ပင်လယ်ကွေ့ကုမ္ပဏီများမှ။ အထူးသဖြင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနှင့်ကာတာနိုင်ငံကနေ။ သို့သော်အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျအခြို့သောပန်းတိုင်များထိမှန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အပြုသဘောဘက်တွင်, သငျသညျကာလတိုနှင့်ကာလရှည်ရနိုင် ပင်လယ်ကွေ့တွင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများ.
ဂျယ်ရီ Varghese ရဲ့စုဆောင်းမှုန်ဆောင်မှုများ
ဂျယ်ရီ Varghese ရဲ့ MBA ဘွဲ့ရဘို့စုဆောင်းမှုစစ်ဆင်ရေး ကျောင်းသားများကိုအမျိုးမျိုးသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစျေးကွက်အနှံ့ကျယ်ပြန့်ပြန့်နှံ့လျက်ရှိသည်။ စျေးကွက်ငှားရမ်းအိန္ဒိယ၏ရှေ့မှောက်တွင်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အားလုံးထိုကဲ့သို့သောကူဝိတ်နှင့်အိုမန်ကဲ့သို့သောအခြားနိုင်ငံများတွင်ကျော်မြင့်တက်စကားပြောခြင်း။ တစ်ဦးအဖြစ်အမှုဆောင်ဂျယ်ရီ Varghese စုဆောင်းမှု ပင်လယ်ကွေ့အတွင်းအချိန်ပြည့်တာ်ထမ်းရှာဖွေသူမိတ်ဖက်။ ကြိုးစားအားထုတ်မှုများအတွက်အသိအမြင်မြှင်ဒီကုမ္ပဏီအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှု။ အထူးသဖြင့်ကတခြားနိုင်ငံတကာစီမံခန့်ခွဲမှုအတိုင်ပင်ခံနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. သည်။ ဤသည်စီမံခန့်ခွဲမှုရှိပါတယ် ပြင်းပြင်းထန်ထန်တစ်ဦးခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ရန်ရင်းနှီးမြုပ်နှံ အခြားသူများနှင့်နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက်ခိုင်မာတဲ့အခြေခံအဆောက်အဦများတည်ဆောက်။
အဆိုပါ စျေးကွက်အခြေခံအဆောက်အဦများ မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်မြင့်သောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းပေါ်မှာဤကုမ္ပဏီအခြေစိုက်စခန်း။ ထိုမှတပါး၎င်းတို့သည်အသစ်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရေရှည်တည်တံ့နိုင်ကြသည်။ အိန္ဒိယတွင်တိုးတိုးလေးစျေးကွက်ကနေ။ သူတို့စုဆောင်းမှုနေရာချထား၏မြင့်မားရောက်ရှိဖို့ထွက်အလုပ်လုပ်နေကြသောကြောင့်နှင့် အားကြီးသောစီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းဆောင်ရည်.
သို့သျောလညျးသငျ၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏လျှင် တောင်အာဖရိကကနေအလုပျသမား သင်သည်လည်းထားရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ကူညီပေးနေကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ, Philipines ထံမှကျွမ်းကျင်သူများ ထို့အပြင်ယူအေအီးအတွက်ချထားပါသည်။ ကုမ္ပဏီ-operated အိန္ဒိယတွင်အဓိကအား။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်သူတို့သည်ကောင်းသောနေရာများရှိခြင်းနေကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဌာနခွဲရုံး၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုဖုံးလွှမ်း ဒေလီကနေအိန္ဒိယ Trivandrum ရန်။
သင်တို့မူကားတစ်ဦးအတွက်ထားရှိရနိုင် အလုပျသမားဒူဘိုင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာများ။ ကုမ္ပဏီ ဆရာ, ဆရာမအလုပ်အကိုင်ကိုရှာဖွေကူညီပေးနေ ကောင်းစွာ-paid အလုပ်အကိုင်ကိုရှာဖွေမန်နေဂျာ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်စီမံကိန်းရုံးများနှစ်ဦးစလုံးသည်နိုင်ငံ၏ဘဏ္ဍာရေးအချက်အချာနေရာ, မွန်ဘိုင်းတွင်တည်ရှိပါသည်။ တစ်ဦးကဒယ်အိုး-အိန္ဒိယရှေ့မှောက်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုခွက်တဆယ်၏ပိုကြီးတဲ့ရေကူးကန်ကိုချိတ်ဆက်နှင့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရဲ့အကောင်းဆုံးရောနှောရရှိရန်ခွင့်ပြု မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ client များအတွက်။ အပြုသဘောဘက်တွင်ဂျယ်ရီ Varghese အများအပြားရုံးများနှင့်အတူတွဲဘက်ဖြစ်ပြီးသူတို့ထဲမှာတည်ရှိပြီးနေကြတယ် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်အမျိုးမျိုးသောအရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများ.
သင်လုပ်နိုင်သည် ယူအေအီးအတွက်အစိုးရကကုမ္ပဏီအလုပ်အကိုင်ရှာတွေ့ & ကိုလည်းကာတာနိုင်ငံအတွက်ကူဝိတ်။ ဂျယ်ရီ Varghese အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေရေးဖြေရှင်းချက်၏ကြောင့်ဖြစ်သည်။ သေချာဖြည့်ဆည်းဖို့အခြားသူများကိုကူညီမှုအတွက် အိန္ဒိယကနေစုဆောင်းတောင်းဆိုချက်များ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုရန်။ နှင့်ကုမ္ပဏီအစဉ်အမြဲအကောင်းဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုပေးထွက်အလုပ်လုပ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အသစ်သော client များကူညီပေးနေစကားပြောခြင်း ပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်ကျွမ်းကျင်သူများငှားရမ်း.
ဒါကကုမ္ပဏီကျိန်းသေသငျသညျကိုကူညီရှာဖွေနိုင်ပါတယ် ဟိုတယ်အလုပ်အကိုင်အအလုပ်အကိုင်များအခွင့်အလမ်းများ။ မိတ်ဖက်ရုံးများမဟာဗျူဟာမြောက်သောနေရာများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအနှံ့တည်ရှိနေကြသည်ဤသည်ကိုကောင်းစွာ-rated ကုမ္ပဏီ။ သူတို့ကဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူစတင်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ။ အဆိုပါလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရဲ့ရုံးတွေ တစ်ခုလုံးကိုဒေသကိုယ်စားပြုစတင်ရန်။ ဒါကြောင့်မြေတပြင်လုံး၏တည်နေရာပတ်ဝန်းကျင်ရှိကြောင့်ဥပမာတစ်ခုမှာယူအေအီးနှင့်ကူဝိတ်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီကျိန်းသေ ပြည်တော်ပြန်ကူညီ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကမ်းလှမ်းမှုထွက်ရောက်ရှိ၌တည်၏။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ကြီးမားသောငွေပမာဏ servicing နေ့စဉ်ကုမ္ပဏီ။ သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံသည့်အတွေ့အကြုံကိုကိုက်ညီဖို့ကြိုးစားနေ။ အဖြစ်ရွေးကောက်တော်မူသောဒေသသူတို့ကိုပြောင်းရွှေ့။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှကိုယ်စားလှယ်လောင်းများစုဆောင်းဖို့ဒီကုမ္ပဏီ enabled ။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ GCC တည်နေရာနှင့်သူတို့ကိုအားမရ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့ကိုလမျးညှနျ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အအုပ်စုများ။
နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအလုပ်ရှာနေအိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်ကျွမ်းကျင်သူများ။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, ငါတို့ ယူအေအီးအတွက်အလုပ်ရှာဖွေသူများအပေါ်ကူညီပေးနေ။ ဒေသခံကျွမ်းကျင်သူများအလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းမှုပို့စ်တင်ရှိရာကျွန်ုပ်တို့၏ website တွင်အများအပြားအုပ်စုများရှိပါတယ်။ နှင့်တောင်အာဖရိကနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေဖြင့်လူဦးကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပို့စ်တင် အလုပ်အကိုင်ရှာတွေ့လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ချက်အတွက်။ ဒါကြောင့်ငါတို့စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်စုများအပေါ်အချက်အလက်များ၏အပိုင်းပိုင်း post အသစ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအကြံပေး။ ဂျယ်ရီ Varghese အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Careers က်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု။
သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ website ပေါ်မှာအသက်ရှင်မတိုင်မီယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော။ ကျိန်းသေသင်တို့သည်လည်းကျွမ်းကျင်သူများဘို့ငါတို့ထိပ်တန်းငှားရမ်းကုမ္ပဏီများသည်ကိုကြည့်သင့်ပါတယ်။ အလုပ်သစ် Careerjet အင်ဂျင်ရှာဖွေနေ နှင့် ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့အ Monster က်ဘ်ဆိုက်။ သူတို့ကသင်၏ CV နှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ကယ့်ကိုထိုက်တန်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ဟာအလွန်ဖြစ်မည်အကြောင်း အစာရှောင်ခြင်းလျှောက်လွှာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌သင်တို့အဘို့ကောင်းသော.
သင်ကရှာတွေ့စေချင်ပါနဲ့ ဒူဘိုင်းယောဘ? ဤစကားမှန်ပေမည်ဖြစ်သော်လည်းကျနော်တို့အဆိုပါအသစ်တစ်ခုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ရန်သင်ကကူညီပေးနိုင်ပါသည် ယူအေအီး!
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ အဆိုပါအမြန်ဆုံးမှ ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်စီးတီးကြီးထွားလာ! - ဒူဘိုင်းမြို့